Xasan Daahir oo si kulul ugu hadlay hoggaan xumida Shabaab (Video) | Salaan Media
Home Wararka Xasan Daahir oo si kulul ugu hadlay hoggaan xumida Shabaab (Video)
Xasan Daahir oo si kulul ugu hadlay hoggaan xumida Shabaab (Video)
Xasan Daahir oo si kulul ugu hadlay hoggaan xumida Shabaab
Kampala(SM)Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka mid ah Hoggaamiyeyaashe Al-Shabaab ee khilaafsan siyaasadda Amiirka kooxdaasi Axmed Godane ayaa wuxuu ku eedeeyay inuu dhinac u leexsaday mas’uuliyadii iyo awoodii Al-Shabaab.
Xasan Daahir oo wareysi siinayay TV-ga Somali Chanel ayaa sheegay in sidaa caadada ah mas’uulkii xilkiisa iyo waajibaadkii loo igmaday si sharci ah ugu soo bixi lagula dhaqmayo sharciga islaamka sida uu qabo ee ah in madaxda kale ay ka shuureyso, go’aan mideysana ay ka qaataan si loo badbaadiyo buu yiri hadafka ay ku taagan yihiin.
Maamulka sare ee Al-Shabaab ayuu ku eedeeyay in uu mas’uul ka yahay dilalka Culumada Soomaaliyeed iyo dadka kale ee fikradiisa kasoo horjeedo, taasoo u sabab ah buu yiri qaabka uu maamulka u dhisan yahay.
‘Dhiig badan oo xaq aheyn ayaa dareemeynaa inuu daadanaaya, waxaasna waxaa keenaya qaabka uu maamulka u dhisan yahay, culumo badan, caaqiliin iyo dad fara badan oo aan raali ka aheyn ayaa nooga dhimatay sidaasi” ayuu yiri Sheekh Xasan oo intaa raaciyay in dad badan oo dadka wax u tari lahaa la dabar gooyay.
“Abuu Mansuur waa nool yahay, mar waa dhaawacmay, waxa aan ka qeylineyno oo qaladaadka aan tirsaneyno ayey ka mid tahay falka lagu raad joogo Abuu Mansour Al-Amriiki, eed sheegasho in lagu dilo waa ka qeylineynaa” ayuu yiri Sheekh Xasan.
Sheekh Xasan wuxuu sheegay in ay hamigooda uu yahay in lasoo celiyo awoodii Islaamka uu caalamka ku lahaa, sida ay wadamada Yurub u mideeyeen awoodooda iyo dhaqaalahooda.
Ugu danbeyntii wuxuu Sheekh Xasan uu sheegay in marna aysan wada hadal la geli doonin Dowladda Soomaaliya oo labo mabda ay kala wataan.
Wuxuu sheegay Sheekh Xasan Daahir Aweys in Hogaamiyaha sare ee ururka Al-Qaacida Ayman Al-zawahiri iney ka war sugayaan si xal looga gaaro dhibaatada hoggaan xumo ee soo wajahay Al-Shabaab, halka Dowladda Soomaaliyana uu ku eedeeyay iney awaamiirta ka qaadato beesha caalamka.
Deeeq Xaji Aadan
xafiska wararka ee salaan madia